Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan Flash Drive
Saxannada Flash waa drives ugu muhiim ah in aad ku hayn kartaa faylasha aad. Flash drives waa size la qaadi karo oo yar sidaas aad qaadi kartaa adiga iyo meel kasta oo aad u isticmaali kartaa. Read More >>
Mararka qaarkood, faylasha lagu kaydiyaa USB drive laga yaabaa lumaan ay sabab u tahay qalad aadanaha, virus ama sababo kale, halkan ha ee lagu hubiyo sida inuu ka soo kabsado xogta aad lumay USB. Read More >>
Dhibaato badiyay xog qiimo leh ka Adata flash drive? Just heli Wondershare Data Recovery iyo bilowdo Adata kabashada flash drive hadda. Read More >>
Sidee inuu ka soo kabsado xogta ka Kingston USB drive? Maqaalkani waxa uu ku tusayaa sida aad u hesho xogta dib eber khasaaro tayada gudahood 3 tallaabo. Read More >>
Tilmaan-kabashada xijaab USB caawisaa in aad ka bogsato xijaab USB iyo soo celinta xogta ka leh barnaamijka Wondershare Data Recovery fudayd. Read More >>
Baadi qaab USB mar dambe waa musiibo, haddii aad akhriso hagahaan oo ay isticmaalaan Data Wondershare Ladnaansho inuu ka soo kabsado xogta ka dib qalad qaab USB. Read More >>
Waxaa la akhrisan kartaa oo qoraal ah. Storage devices ayaa la sheegay loogu talagalay in ka yar a kaydinta disk caadiga ah, iyadoo qaar ka mid ah iyagoo size ee suulka ah. Read More >>
Waxaa jira siyaabo dhowr ah si loo hubiyo in flash ama drive suulka aan xijaabi oo keliya, laakiin waxaa sidoo kale u qaybsan sida baahida iyo rabitaanka ah user si loo hubiyo in files iyo sidoo kale f ah Read More >>
Marka laga reebo oo keliya in tani ay tahay awood u leeyahay inuu akhriyo macluumaadka. Read More >>
Waa mid ka mid ah noocyada ugu badan oo ka mid ah qalabka lagu kaydiyo dibadda in ay hubiyaan in laga yaabo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah in arrintan la xiriira si ay u hesho kaydinta ugu wanaagsan oo ugu horumarsan f Read More >>
Waxaa jira tobanaan kun oo sababo la xidhiidha qaybaha nidaamka hardware Read More >>
Kuwa soo socda waa arrimaha saddex ugu badan in user a wajahaya kaas oo sidoo kale u kaxeeyaa si loo hubiyo in flash aan la cusboonaysiiyey oo kaliya laakiin sidoo kale looga eego cayayaanka: Read More >>
Marka USB drives qalinka sidoo kale loo yaqaan USB drives suulka ayaa marka hore la bilaabay markaas user leeyahay, Doorasho ma arrintan la xiriira oo ay si dhab ah ahaayeen oo aan awoodin in ay helaan ugu fiican marka ay timaado doorashada Read More >>
Iyadoo horumarinta ee sayniska iyo farsamada waa in dhalashada dadka helayso ugu fiican oo gobolka ka mid ah goobaha lagu keydiyo tahay qaab ka mid ah warbaahinta dibadda iyo sidoo kale qalabka USB ah in a Read More >>